သင့်သွေးအမျိုးအစားအရ သင်ဟာ ဘယ်လို girlfriendမျိုးလဲ?
ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာ သွေးအမျိုးအစားက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ စိတ်ထား၊ အခြားသူတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ညီမှုကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို သူ့ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားကနေ ပြောပြနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကိုယ့်သွေးအမျိုးအစားအရ ကိုယ်က ဘယ်လို girlfriend မျိုးလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ အပြင်ပန်းမှာတော့ စိတ်ရှုပ်စရာမရှိသလို ပြုမှုလေ့ရှိပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ အရမ်းဂရုတစိုက်နေတတ်ပြီး မနာလိုလွယ်နိုင်ပါတယ်။ dating နဲ့ပတ်သတ်လာရင် ကိုယ်ဘာကိုကြိုက်သလဲ၊ ဘာကို မကြိုက်ဘူးလဲဆိုတာ၊ ဘယ်လိုပါတနာမျိုးကို ရှာရမယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်က အမြဲတမ်းမြင့်တတ်နေပြီး အခြေအနေတွေက အိုသွေးတွေရဲ့ စိတ်ကို မြန်ဆန်စွာ သက်ရောက်စေနိုင်တာကြောင့် အချို့လူတွေက သင့်ကို “စိတ်ဆတ်တယ်”လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ” ငါဗိုက်ဆာနေပြီ” ဒါမှမဟုတ် “ငါပင်ပန်းနေပြီ” လို့မကြာခဏ ပြောမိနေသလား? ဒါက အိုသွေးတွေရဲ့ ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဝန်ခံချက်လေးတွေကြောင့်ပဲ သင့်ကောင်လေးက သင့်အပေါ် အချစ်ပိုစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုသွေးလေးတွေက ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ယောက်တည်း နေတတ်သူတွေဖြစ်ပေမယ့် ချစ်သူရလာပြီဆိုရင်တော့ အထီးကျန်ရတာကို မနှစ်သက်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမထားဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အခါ ၊ ဒေါသထွက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ အရမ်းတိတ်ဆိတ်ပြီး ခပ်တန်းတန်းနေလာနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက် အရမ်းမြင့်သူတွေ ဖြစ်သော်လည်း အိုသွေးတွေဟာ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေကို ဝန်မပိစေချင်တာကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ဖိစီးခံတာမျိုး၊ ကိုယ့်ရဲ့ မကျေနပ်မှုတွေ၊ မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကို မျိုသိပ်ထားတာမျိုးကို လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သို့သော် ဘယ်မပျော်ရွှင်မှုမဆို နောက်နေ့မှာ မေ့လျော့သွားပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ အခြားသူတွေ အဆင်မပြေဖြစ်တာကို မကြိုက်တဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ပဲ သင့်ရဲ့မပျော်ရွှင်မှုတွေကို သင့်နှလုံးသားထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိပြီး အပြင်ပန်းမှာ ဘာမှမဖြစ်သလို ပြုမှုလေ့ရှိကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ “ဘာမှမမှားဘူး”လို့ သင်ပြောတဲ့အချိန်က တကယ်တမ်းတော့ အားလုံး မှားနေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ လူတွေက သင့်ကို “မကြာခဏငိုယိုသူ”လို့ အကြိမ်များစွာ ခေါ်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင်နှစ်သက်တဲ့အခါ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း အားစိုက်ထုတ်တတ်ပြီး သူ့ကို ကိုယ့်ထက် ဦးစားပေးနေရာမှာ ထားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရာက သင်ချစ်ရသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကိုယ့်ထက်ဦးစားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ သင်ဟာ ထိုသူ နှစ်သက်စေဖို့ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုခုဆိုရင်တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖိအားပေးလုပ်ခိုင်းပါလိမ်မယ်။ သင်ဟာ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေဆီက ချီးမွမ်းခံလိုပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဆီက ချီးမွမ်းစကားလေးတွေက သူစိမ်းပြောတာထက် ပိုအဖိုးတန်ပြီး အရေးပါလို့ပါပဲ။
သင့်နှလုံးသားကို တကယ်ဖွင့်မပေးခင်မှာ အဲဒီလူကို သိကျွမ်းဖို့ အချိန်အများကြီး လိုအပ်တာကြောင့် သင်ဟာ ရင်းနှီးမှုရဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ သင်က ရိုးစင်းပါတယ်။ သင့်မှာ ကောင်းတဲ့ခံစားချက်မရှိဘူးဆိုရင် အဲဒီလူဆီကနေ မပတ်သတ်မိအောင် ရှောင်လေ့ရှိပါတယ်။
ဘီသွေးလေးတွေက သူလိုငါလိုဖြစ်ရတာ၊ ထိန်းချုပ်ခံရတာကို မုန်းပါတယ်။ လက်တွဲဖော်က သင့်ကို ဘာလုပ်နိုင်တယ်/ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ အမြဲပြောနေရင် သူက သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်နေရင်တောင်မှ တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲ အဆက်ဖြတ်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးရသူ တစ်ယောက်ယောက်က ချီးမွမ်းပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီအားပေးမှုက ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို အောင်မြင်ဖို့နှင့် ပိုမြင့်မားတဲ့နေရာကို ရောက်ရှိဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့ စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ သင့်မှာ GirlBoss အသွင်အပြင်နဲ့ အရှိန်အဝါရှိသော်လည်း သင့်ကို တကယ်ချစ်ပြီး နားလည်ပေးသူကိုသာ ပွင့်လင်းပါလိမ့်မယ်။
အိုသွေးတွေလိုပဲ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ခံစားချက်တွေက အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကောင်းကောင်းမဖော်ပြတတ်တဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ရှိပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ မိခင်တစ်ယောက်လို ပြုမှုရတာ မကြိုက်တာကြောင့် သင်ဟာ ရင့်ကျက်ပေမယ့် ဘယ်အချိန်မှာ ပျော်ရမယ်ဆိုတာသိတဲ့ ပါတနာတစ်ယောက်ကို လိုချင်တတ်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင်မကြိုက်ရင် (သို့) မုန်းရင် အဲဒီလူကို ဘယ်တော့မှ နောက်တစ်ခါ ဆက်ဆံတာမျိုး မလုပ်တော့ပါဘူး။ သင်ဟာ အခြေအနေကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားသူ critical thinker တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းက သင့်အချစ်ရေးမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတိုင်း နောက်ထပ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။